Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah | Apg29
Dad badan ayaa maanta ku nool isagoo ka Jaahil ah total ku saabsan Ilaah iyo nolosha in dalabyo Wuxuu.
Marka aad isku halleeya Ciise, aad noqon doontaan ilmo Ilaah. Ruuxa Ilaah barbaro wadnahaaga iyo aad waxaa ka buuxa jacaylka Ilaah. Ciise waxa ay la barbar biyaha nool.
Ciise oo ceelka biyaha agtiisa fadhiyey, oo naag la hadlayo.
"Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah iyo kuu yahay kan kugu in, I waraabi, adigu waad weyddiisan lahayd isaga, oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool." Yooxanaa. 4:10
Dad badan ayaa maanta ku nool isagoo ka Jaahil ah total ku saabsan Ilaah iyo nolosha in dalabyo Wuxuu. Markaas waxaa jira kuwa qabaa inay ogaadaan waxa ay ku saabsan tahay si qallafsan, laakiin in uu ahaa dhagar a si gaar ah soo saaray.
Si aad u ogaato dalab Ilaah in qof kasta oo aad u baahan tahay si ay u soo noqdaan si ay samayso Kitaabka Quduuska ah. Marka Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay, aad nasiib badan doono dareen sida "caajiso iyo uninteresting buugga" ka. Inkasta oo tani waa reer xamarku ah.
Waa maxay waxa ku saabsan ka dibna?
jacaylka Ilaah ayaa nalagu soo dajiyey by Wiilka Ilaah, Ciise rigoore dembi qaaday on iskutallaabta. Ilaah baa qaatay hindise ah oo na bixiyaan cafiska dembiyada. Waxaan leenahay karaa qalbi nadiif ah. Ilaah waxa uu rabaa inuu u xaqiijiyo jacaylkiisii ​​inoogu marka aan dooran in ay aaminsan yihiin in Ciise.
Naagtii Ciise la fikirka ah in uu ula jeedo biyaha caadiga ah la hadlay. Iyadu waa inaanay ahaa xataa hadiyaddii Ilaah iyo kuu ahaa in la hadleen ayay ku.
Erayada in Kitaabka Quduuska ah waxaa loo qoray by dadka, laakiin waxay yihiin erayadii waa la waxyiga Ilaah. naagtu aanay sameeyey markii hore, laakiin ka dib, kuwaas oo la hadlayay iyada ku. Marka aad qayb ka mid ah Kitaabka Quduuska ah qaadan, in ay fahmaan in marka aad qayb ka mid ah erayga Ilaah, samada iyo dhulka qaado. Oo dalab u kiiskan waa in aad yeelan kartaa il idinku dhex jirtaa. Ilo ku fiican oo aan marnaba samayn waddaa qalalan. Markaas ma waxaad eegi ha ahaado halkan iyo halkaas. Ka dibna waa inaad hadiyadda nolosha idinku dhex jirtaa. Markaasaa Ruuxii Ilaah wuxuu doonayaa in uu idiinku. Waxa uu doonayaa inuu caawiyo in aad ku noolaato nolosha Masiixiyiinta. Waa wax cajiib ah. Hadiyad A ee nolosha, nabad, jacayl iyo farxad. All sababta oo ah waxa Ciise inoo sameeyey iyada oo uu dhimashada iyo sarakicista. Tani, saaxiibkay, waxa outclasses this dunida jebiyey ceelal. Dembigu lumiyo racfaanka marka aad hesho ay u dhadhamiyaan hadiyaddii Ilaah.
Sidee loo heli doontaan hadiyadda Ilaah?
"... markaa adigu waad weyddiisan lahayd isaga, '- Sariir iyo Ciise biyaha nool
"... oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool." - Ciise wuxuu ku siinayaa nolosha, marka aad weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan.
Aadan fahmin gabi ahaanba wax kasta, laakiin waxa aad si ammaan ah ogaan kartaa in Ilaah keliya siiyaa hadiyado wanaagsan. Qaado note biyaha nool ah maanta. Waxaa idin dahira oo idin siiyaa xoog cusub iyo nolol. Fur Kitaabka Quduuska ah oo akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan nolosha xiiso leh Ciise.
Ilaah ha idiin barakeeyo